Ny 1 TB iPad Pro dia mampihena ny vidiny 200 euro | Vaovao IPhone
Ny 1 TB iPad Pro dia mampihena ny vidiny 200 euro
Tamin'ny nanombohan'ny iPhone 11 vaovao, nanararaotra izany ny orinasa monina ao Cupertino ovao ny vidin'ny vokatra sasany nataonao. Amin'ny lafiny iray, hitantsika ny fihenan'ny fehikibo ho an'ny milanesse Apple Watch sy ny maodely hoditra sasany hatramin'ny 50 euro.
Saingy tsy izy ireo ihany no varotra, nanomboka ny 1 TB iPad Pro dia nampidina ny vidiny ihany koa. Ny maodely 1 TB no maodely lafo indrindra ary manana RAM betsaka kokoa noho ny hafa capacities. Ity maodely ity dia nahazo fihenam-bidy 200 euro amin'ny kinova rehetra misy azy, na amin'ny kinovan'ny 11 sy 12,9-inch.
Ny vidin'ny fandefasana iPad Pro 11-inch miaraka amin'ny fitehirizana 1TB tamin'ny volana Oktobra tamin'ny taona lasa, 1.709 euro teo izany, raha aorian'ny fihenan'ny dia 1.489 euro izany. Ny maodely Cellular 11-inch dia nidina hatramin'ny 1.879 euro ka hatramin'ny 1.659 androany.
Ny maodely 12,9-inch 1 TB dia nahatratra 1.929 euro ny tsena, vidiny nidina hatramin'ny 1.709 euro. Ny kinova finday, efa lasa 2.099 euro izany ka hatramin'ny 1.879 euro ankehitriny.
Ny iPad Pro 2018 dia misy ao amin'ny fitehirizana 64, 256, 512 ary 1 TB, ary ity farany ity no iray tantanan'ny RAM 6 GB, izay no fitaovana Apple voalohany nahatratra izany habetsaky ny RAM izany.
Precio tena izy
iPad Pro 11 "1 TB 1.709 € 1.489 €
iPad Pro 11 "1 TB Cellular 1.879 € 1.659 €
iPad Pro 12 9 "1 TB 1.929 € 1.709 €
iPad Pro 12 9 "Cellular TB 1 2.099 € 1.879 €
Tsy vao sambany ny Apple no nampihena ny vidin'ny fitaovana rehetra ao aminy, Nitranga volana vitsivitsy lasa izay tao amin'ny Mac sasany, rehefa mihena ny vidin'ny fahatsiarovan-tena, zavatra iray izay tsy isalasalana fa ankasitrahan'i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ny 1 TB iPad Pro dia mampihena ny vidiny 200 euro
Isan'andro - Famaranan-teny fototra sy mistery tsy voavaha
Ny iPhone 11 dia manana famerenana amin'ny laoniny saingy tsy mandeha izy io